बेलायतबाट नेपालीले १२ खर्ब क्षतिपूर्ति पाउने ? « Sajha Page
बेलायतबाट नेपालीले १२ खर्ब क्षतिपूर्ति पाउने ?
काठमाडौँ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले १२ खर्ब हाराहारी क्षतिपूर्ति बेलायतले दिने दावी गरेका छन् । उक्त रकम नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङबराबर हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले रकमको यकिन भइनसकेको बताए पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आफ्नै गणनाअनुसार १२ खर्ब एकमुष्ट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने देखिएको हो ।